Cyberwarfare ဆိုတာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computer & Cell Phone » Cyberwarfare ဆိုတာ
Posted by Alpha Vanishing on Sep 2, 2012 in Computer & Cell Phone, Software & Links | 35 comments
Cyberwarfare ဆိုတာဟာ အင်တာနက်အခြေပြု တိုက်ပွဲတစ်ခုပါ။ နိုင်ငံရေးအရင်းခံပြီး သတင်း အချက်အလက်နှင့် သတင်းအချက်အလက်စနစ်များကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ Cyberwarfare တိုက်ခိုက်မှုမှာ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေနဲ့ ကွန်ရက်တွေကို အလုပ်မလုပ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်မယ်။ အရေးပါတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ချိနဲ့သွားအောင် သို့မဟုတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။အချက်အလက်တွေကို ခိုးယူမယ် သို့မဟုတ် အစီအစဉ်တကျ
ဖြစ်နေတာတွေကို ကမောက်ကမဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကို အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးစေရန် ပြုလုပ်မယ် စသည်ဖြင့် အခြားသော ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိတဲ့ အဖျက်လုပ်ငန်းတွေကို စနစ်တကျပြုလုပ်တဲ့ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုမျိုးစုံ ပါဝင်ပါတယ်။ Inside Cyber Warfare ဆိုတဲ့စာအုပ်ရေးသားသူ Teffery Carr က ဘယ်နိုင်ငံကမဆို တစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခုကို ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရင်းမြစ်တွေရဲ့ ဘယ်အရာမဆိုကိုလည်း ဆိုက်ဘာပေါ်ကနေ တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ စစ်တပ်အများစုဟာ ကွန်ရက်ဗဟိုပြုနဲ့ အင်တာနက်ကို ဆက်သွယ်ထားကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လုံခြုံမှုဆိုတာ မရှိပါဘူးဆိုပါတယ်။ တူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့အုပ်စုတွေနဲ့ တစ်သီး
ပုဂ္ဂလတွေက Cyberwarfare တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံခိုင်းနှိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ အင်တာနက်ဟာ လက်တစ်ဘက်တည်းနဲ့ ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကို ပေးတယ်ဆိုရမှာပါ။ ဒါကို ကြီးကျယ်တဲ့ချိန်ညှိမှုလို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။
Cyberwarfare ၏ ဥပမာများ
၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဆားဘီးယားရဲ့ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ထဲသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး လေကြောင်းထိန်းချုပ်မှုများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် ဆားဘီးယားပစ်မှတ်ကို ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ရာ၌ လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀ရ ခုနှစ်တွင် ဒက်စတိုးနီးယား၌ Botnet ဖြစ်နေတဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော ကွန်ပျူတာများက အစိုးရ၊ စီးပွားရေးနဲ့ မီဒီယာတွေရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာကို ပြုတ်ကျစေရန်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ ရုရှားက နှစ်နိုင်ငံအကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုကြောင့် ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာတော့ Ghost Net လို့ခေါ်တဲ့ ဆိုက်ဘာသူလျှိုကွန်ရက်က ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံပေါင်း တစ်ရာကျော်မှ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၏ အရေးပါသော လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကို ရယူခဲ့ပါတယ်။ GhostNet ဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ မူရင်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပေမယ့် ၎င်းနိုင်ငံက ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Cyberwarfare
တိုက်ခိုက်မှုကို အထိရောက်ဆုံးကာကွယ်မှုကတော့ ကွန်ရက်တွေနဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို လုံခြုံစိတ်ချအောင် ပြုလုပ်ထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံမှုရှိစေရန် ခေတ်နှင့်အညီမွမ်းမံခြင်း (သို့) အချိန်နှင့်အညီ မွမ်းမံခြင်းတို့ကို စနစ်အားလုံးမှာ ပြုလုပ်ထားရမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်ရှိနေတဲ့ စနစ်တွေဟာ တိုက်ခိုက်မှုကို သယ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အလားအလာရှိတဲ့ ပျက်စီးမှုများကို လျော့ပါးသက်သာမှုရှိစေရန်အတွက် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်မှုကဲ့သို့သော စီမံကိန်းတွေနဲ့ အင်တာနက်ပြတ်တောက်သွားချိန်မှာ ဘာတွေလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ ကြိုတင်စီမံမှုတွေကိုလည်း ပြုလုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာရေ ဘယ်သူ့လက်ချက် လဲတော့မသိဘူး ဂေဇက် တော့တစ်ရက်လောက်ဒေါင်းသွားတယ်။
ကျွန်တော် အပါအဝင် Myanmar Cyber Counter -DDos Team ရဲ့လက်ချက်ပါ
သာသနာကိုဖျက်မှာလား၊ဂုဏ်ဆောင်မှာလား၊ အရေခြုံလား post နဲ ့ပါတ်သတ်ပြီးတော့ admin များကတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးခြင်းမရှိလို ့တိုက်နေတာပါ
မကြာမီ ဒီ site ပြန် ဒေါင်းတော့မယ်…..
ထင်တော့အထင်သား ဆရာရယ်၊ ဒါပေသည့် ဦးလေးတို့လို စာရိုးရိုး ဖတ်သူများ အတွက် နဲနဲတော့ ငဲ့ပါလားလို့ …..အဟင့်! သူကြီးဂွကျတာ မှန်ပေမဲ့ Post ကိုဘဲ ရွေးပြီး လုပ်လို့မရဘူးလားဟင်?
ဒီနေ့ အိမ်မြောင် အမြီးပြတ် ဖြစ်သွားတဲ့ ဦးကြီးကျောက်
အနှီပိုစ့် ဟာ ပိုစ့်တင်သူရဲ့ သဘော သာဖြစ်ပြီး မန်းဂေဇက်ရဲ့ မူဝါဒ မဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်
အယ်ဒီတာဆီကို ကန့်ကွက်စာပို့ပြီး ဖျက်ခိုင်းရင် ဖျက်ပေးမယ် လို့ ယူဆပါတယ်
အခု အချိန်က အယ်ဒီတာ (ကျုပ်တို့အခေါ် အရဆိုရင်တော့ သဂျီး ပေါ့လေ)
ခရီးသွားနေတာကြောင့်မို့ response နောက်ကျနေတယ် ဖြစ်မှာပါ
တခြား စာပေလက်ရာကောင်းတွေများစွာ တင်ထားတဲ့နေရာမို့
တဦးတယောက် ကြောင့် ပိုစ့်တပုဒ်ကြောင့်
တရွာလုံး ပြုတ်ကျအောင် တိုက်ခိုက်တာကိုတော့
(မြန်မြန် ပြန်လာဖြေခဲ့ဦး သဂျီးရေ. ရောက်ရာအရပ်ကနေ)
Alpha Vanishing ရေ ..အဲဒီ ရခိုင်ဖက်က အနှီပို့တွေ ခဏခဏ လာတတ်ပါတယ်..။ တက်လာတိုင်းလဲ ရွာမှာပွဲဆူစေပြီး Site Admin ဆီကို ကန့်ကွက်လို့ ပျက်သိမ်းခဲ့တဲ့ ပို့စ်ပေါင်းလဲ မနည်းလှပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဝက်ဆိုဒ်ရဲ့ သဘောထားနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ ခုလို ဝင်ဖတ်၊ ဝင်ရေးနေလို့ သိလောက်မယ်ထင်တာပဲ။ ဆိုဒ် တာဝန်ရှီသူ ခရီးသွားနေတယ်ပြောပါတယ်..။ သူပြန်လာရင် တစ်ခုခု ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ အခုပို့စ်မှာလဲ ပို့စ်တင်သုူရဲ့ သဘောထားဖြစ်တာကြောင့် ဆိုဒ်ကို ဒီလိုဖြစ်အောင်တော့ မလုပ်သင့်ဘူးလို့မြင်မိတယ်။
(ဒဂျီးရေ… ကွိကွိ )
တကယ်တော့ ဆိုဒ် အက်ဒမင်တွေ တာဝန်ရှိတယ်ထင်ပါတယ် ၊
အကျိုးအကြောင်းမဆီလျှော်တဲ့ ကလီကမာ ပို့စ် ၊ ပြဿနာကြီးတွေသယ်ဆောင်
လာတဲ့ ပို့စ်တွေကို အလျင်းသင့်သလို တားဆီးပေးနိုင် ဖို့ လိုတယ်ထင်မိတယ် ။
ဥပမာ ကျနော်တို့ ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ တော်ကြီးကို ဖျက်ဆီးနှောင့်ယှက်တဲ့ ပို့စ်မျိုး ။
ဆရာကြီး Myanmar Cyber Counter -DDos Team ခင်ညား…
ဟိုပို့စ်ကို မကျေနပ်လို့ သဂျီး ရွာလည်သွားနေတုန်း ရွာပြုတ်အောင်
တားတားတို့ရို ဒီရွာလေးကို အမှီပြုပီး ဖွန်နေ တွန်နေရတဲ့
လူပျိုကာလသားများ အလွန် ထိခိုက်နစ်နာပါဒယ်။
တားတားကို ချစ်တဲ့ ရွာသူလေးတွေ ခင်ညားကြီးတို့
ရှိလို့ …. ရွာထဲဝင်မရဘဲ.. တော်လှန်ရေးသမားလေး
ဂေဇက်က တစ်သိန်းပြည့်လို့ ရှိရင် ခင်ညားတို့ကို လုပ်ချင်တာလုပ်ရအောင်
ဘီဘီတိုက်၊ ဆီစိုက်ပီးဘာ… မာဆပ်လိုက်ပို့မယ်ဂျာ… ဟီးး
အခုလောလောဆယ် ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော့် team ကလူတွေက ban လိုက်ပြီ
ကျွန်တော့် ကို MG ဘက်ကလူလို ့အထင်လွဲသွားတယ်
ဖြစ်ရမယ် ကိုရင်ရယ်. ကျုပ် ပြောချင်တာ သည်လိုဗျာ
သည်ရွာကြီးထဲမှာ ဩဂုတ်လ တစ်လတည်းကို ပိုစ့် ၇၀ဝကျော် တက်တယ်ခင်ဗျ
ဆိုက် အက်ဒမင်ရေးတာ ၂-၃ပုဒ် အပြင် မပိုဘူးဗျာ
အနှီ ပိုစ့် ၇၀ဝကျော် ကို လက်တလောရွာထဲ လှုပ်ရှားသွားလာနေကြတဲ့
(ရွာ့ သန်းခေါင်စာရင်းအရ) ရွာသူား အယောက် ၂၀ဝလောက်က ရောကြတာဗျ
ဒါကိုဖတ်နေတဲ့ (မန်ဘာမဝင်ပဲ) လူက အယောက်၁သောင်းလောက်ရှိတယ်
ဆိုတော့ သည်တလတည်းရဲ့ ပိုစ့် ၇၀ဝ ကျော်မှာ
သုတ ပိုစ့် ရာဂဏန်း. ရသပိုစ့် ရာဂဏန်း ဓာတ်ပုံနဲ့ ကဗျာ ရာဂဏန်း
သတင်း က ရာဂဏန်း ဗျို့
လူအစုံနေတဲ့ ရွာမို့ စရိုက်အစုံတော့ ရှိကြသပေါ့ဗျာ
ရွာသူားတွေ ကန့်ကွက်ရင်တော့. ဖျက်ပစ် စမြဲပါပဲ
ဒါကြောင့်လည်း ရွာမှာ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ရှေ့ဆက်နိုင်ခဲ့ကြတာပါ
ရွာကြီး မီးနဲ့တိုက်တာကိုတော့ မလုပ်စေလိုကြောင်းနဲ့
သည်တခါ response နောက်ကျတာကတော့ သဂျီး ခရီးသွားနေလို့ပါ
ကိုယ့်ဆြာကိုလည်း ရွာသားတစ်ယောက်လို ခုချိန်ကစပြီး ခင်မင်စွာ ဆက်ဆံလိုပါကြောင်းနဲ့
IT အကြောင်း ရေးသူနည်းသေးတဲ့ သည်ရွာကြီးမှာ. ကိုယ့်ဆြာ တတ်ကျွမ်းတဲ့
IT ဆောင်းပါးတွေ ရေးပါဦးလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ် ဗျို့
စကားမစပ် ခုပိုစ့်ကပေးတဲ့ ဗဟုသုတတွေအတွက် လက်မတစ်ချောင်း
စိတ်မကောင်းပါဘူး ငါ့တူရယ်၊ ဦးလေး တကယ် ပြောတာပါ။ မင့်သူငယ်ချင်း များလဲ ပြောပြဘာ၊ ဦးလေးတို့က စာချစ်သူတွေပါ။ ဒါပေမည့် ရွာထဲမှာက သိတဲ့အတိုင်း စာမျိုးစုံတင်နေကြတာ…..
ကိုမိုးမှောင်ရေ… ဆိုဒ်ကို ဟက် ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရေးတေးတေး ပေါက်သွားပါပြီ။ ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့နော်..။ ဟတ် စရာတောင်မလိုပါဘူး။ အယ်ဒီတာ ကိုခိုင် ဆီကို ကန့်ကွက်ပါကြောင်း အီးမေးလေးသာ သေချာရေးပို့လိုက်ပါ။ (သူ ခရီးသွားနေလို့ပါ ) ခုတော့ စာပေကို ဝါသနာပါတဲ့၊ စာရေးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ၊ သတင်းကို ဆာလောင်နေတဲ့ …နှစ် ၂ဝ ကျော် ပိတ်လှောင်ထားခံရတဲ့ မြန်မာပြည် သူပြည်သားတွေကိုပဲ ထိခိုက်မှု ဖြစ်လာတာပေါ့။ တကယ်လို့…တကယ့်ကို တကယ်လို့ ကျနော်သာ နည်းပညာကျွမ်းကျင်တဲ့ ဟတ်ကာ တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အစိုးရ ဝါဒဖြန့် ဆိုက်တွေ၊ ဘာသာရေးကို လှည်းစားလိမ်ညာပြီး ကျနော်တို ဘာသာ ၊ လူမျိုးပြုန်းအောင် လုပ်နေတဲ့ ဆိုဒ်တွေကိုပဲံ ဟတ်ကင် လုပ်ပြီး့တိုင်းပြည်၊ ပြည်သူ နဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ အပေါ်တာ ဝန်ယူကျေပြီး ကုသိုလ် ယူ လိုက်ချင်စမ်းပါဘိ(ကျနော် အတွေးပါ.)။သင်ပေးမယ့် သူရှိရင်တော့ ကျနော်အရမ်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုပါ။
ကျွန်တော်တို ့လက်လှမ်းမှီ သမျှ တိုက်နေပါတယ် ကျွန်တော့် facebook မှာ hack ထားတဲ ့ပြည်ပ site ပြည်တွင်း site တွေကို နေ ့စဉ် update လုပ်ပြီး post တင်ပေးနေပါတယ်
ဒါကတော့ ကျွန်တော့် FB link ပါ
Alpha Vanishing ရေ… စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ…
အထက်က ကိုဂီ ပြောသလိုပါပဲဗျာ ..
အဲ့ဒီ ပို့စ်က မန်းဂေဇက်ရဲ့ မူဝါဒ မဟုတ်ပါဘူး …
ရေးသူ၊ တင်သူရဲ့ သဘောထားသာ ဖြစ်ပါတယ် ..
ငါးခုတ်မ တစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံး ပုပ် ဆိုပေမယ့် ..
အဲ့ဒီပို့စ် တစ်ပုဒ်ကြောင့်တော့ ကျန်တဲ့ ရွာသူားတွေ (မန်ဘာတွေ)
ဒါလေးတော့ ပြောချင်မိသား …
ကျုပ်လည်း မနက်ကနေ ရွာထဲ ဝင်မရလို့ စိတ်ညစ်နေရသလို ..
အခြားသူတွေလည်း စိတ်ညစ်ကြမှာပဲဗျ ..
အဲ့ဒီလို သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် တွေးမိပါရဲ့ဗျာ …
သဂျီးလည်း မနက်ဖြန် သဘက်လောက်ဆို ပြန်ရောက်ပါတော့မယ် …
အိုဘယ့် .. သဂျီးရယ် ..
မြန်မြန်သာ ပြန်လာပါတော့ကွယ် …
ကျွန်တော်က Myanmar Cyber Army နဲ့Operation Rohingya , Myanmar Cyber Counter-DDos Team စတဲ့အဖွဲ ့တွေရဲ ့Memember တစ်ယောက်ပါ အခုကိစ နဲ ့ပါတ်သတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို Myanmar Cyber Counter-DDos Team ကနေ ပြီး Ban လိုက်ပါတယ်..
ကျန်တဲ့ အဖွဲ ့တွေကပါ ကျွန်တော့်ရဲ့image ကိုတစ်မျိုးအမြင်မခံနိုင်ပါဘူး
သတိပေးခဲ့တာတွေအတွက် လည်း ကျေးကျေးပါလို့
(မမှန်ဘူးဆိုတာ သိရင်တောင် )
အယ်ဒီတာ့ သဘောသက်သက်နဲ့ ဖျက်ပစ်တတ်တဲ့ ရွာ မဟုတ်ဘူးဗျ
ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ အများ ထောက်ခံမှ ကန့်ကွက်မှ. ဖျက်တာ ပြုပြင်တာ
လုပ်လေ့ရှိတဲ့ ရွာ ဆိုတော့. ကိုရင်တို့ဘက်က တုန့်ပြန်တာ နှေးတယ်
အက်ဒမင် က ဂရုမစိုက်ဘူး. ဒါမှမဟုတ် အရေးမလုပ်ဘူး
တကြိတ်တည်း တကြံတည်း. လို့ အထင်လွဲကောင်း လွဲစရာပါဗျာ
ကျုပ်တို့သဂျီးကလည်း အဂ္ဂမဟာ လစ်ဘရယ်သမားဗျ
ငြင်းခုံခြင်း အနုပညာ ဆိုပြီး. သူ့အယူ ကိုယ့်အယူ
ကလောင်ထက်ကနေ ငြင်းခိုင်း brainstorm လုပ်ခိုင်းရင်း
ဗဟုသုတ တိုးပွားစေတယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို အတော် အလေးထားတာကလားး
သူကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့လို အလုပ်ကောင်းလို့ မူစလင် လို့ စွပ်စွဲခံထိလား ထိရဲ့
ဆဲစာလေးတွေ ချီးမြှင့်ခံထိလား ထိရဲ့. အဲ့ လက်တုန့်လည်းမပြန်သလို
ဥပက္ခာ တရားလည်း လက်ကိုင်ထားတတ်သေးတယ်
(ကြာရင်သိမပေါ့ ဆိုပြီးတော့လား မဆိုနိုင်)
ဆိုတော့ ဟိုတလောလေးက မိုးပြာကိစ္စ အသံကျယ်ခဲ့သေးတယ်
ရွာ့သင်ပုံးမှာ ခရီးသွားမှာမို့ စိတ်မချလို့ အမှာစာရေးခဲ့လို့ ကျုပ်တို့က ခုလို
ဒါတွေသိနေပြီး သည်လိုပြန်ပြေ ပြနိုင်တာပါဗျာ
အထက်က ကိစ္စတွေ ဘယ်ဟာမှန်တယ် ဘယ်ဟာမှားတယ် ဘေးချိတ်လို့
သဂျီး မရှိတဲ့အချိန်မို့ ပါလို့ ကိုရင့်အသင်းအဖွဲ့ ကိုလည်း သိစေလိုပါကြောင်း
ဩဂုတ် တလတည်းရဲ့ ပိုစ့် ၇၀ဝကျော် စာဖတ်သး ၁သောင်းကျော်ကိုလည်း
ငဲ့စေလိုကြောင်း မေတ္တာ ရပ်ရင်း
ကိုရင်လည်း အမြန်ဆုံး အဆင်ပြေ စေလိုပါကြောင်း ဆန္ဒ ပြုပါတယ်ဗျာ
အေးဝတီကြီး(or)သန်းထွှဋ်ဦး(or)ရိုဟင်ဂျာချစ်သူ(or)အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ ဆိုတဲ့ ကောင်ကို ဒီ ဘာသာရေးပို့စ်တွေ ထပ်တင်တာနဲ့ ထုတ်ပေးပါ … မထုတ်ရင် တစ်ဆိုက်လုံး bot သွင်းခံရမယ်
Myanmar Cyber Counter-DDos Team….
အူးလေး အူးလေးပြောတဲ့အကောင့်တွေက တစ် .. တစ်ယောက်ထဲ ????
အတိသဉ္ဇာ နဲ့ ကိုသန်းထွဋဦး ဟာ တယောက်တည်းပါ
အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်သူလို့ ယေဘုယ. သိထားပါတယ်
ဘယ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သလဲ မသိပေမယ့်
ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တော့ မဟုတ်ဘူး လို့ထင်ပါတယ်
သည်ပြဿနာတွေ သူနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး လို့ ယူဆလို့ပါ
အေးဝတီကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်းပေါ်တော့မှ ပေါ်လာတဲ့ မန်ဘာတယောက်ပါ
သူဘယ်လိုတွေ ရေးလေ့ ပြောလေ့ရှိလည်းတော့ ကိုယ့်ဆြာလည်း သိမှာဖြစ်ပါတယ်
ရိုဟင်ဂျာ ချစ်သူ ကတော့ ပီးခဲ့တဲ့ လကုန်ပိုင်းကမှ ပြသနာပိုစ့်နဲ့အတူ
ဒါတွေ ပြောနိုင်တာက. မန်ဘာတယောက်ရဲ့ ကောမန့်ပေးတဲ့ လိုဂိုကိုကြည့်ရင်
သူရွာထဲ ဘယ်လောက် ပါဝင်ပတ်သတ်ဖူးလဲ ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်
အဗေတာ ဘေးက ဂဏန်းလေးတွေလေဗျာ
ကျနော့် အဗေတာ ကိုကြည့်ရင် ၄၀၀ဝကျော် တွေ့ပါမယ်
ကျနော် ပိုစ့်+ကောမန့် ၄၀၀ဝကျော် လောက် hit ဖြစ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာ
ထားပါတော့ hit ကိစ္စ
ကိုယ့်ဆြာ အိုင်ပီ ကြည့်လို့ရရင်လည်း.
အိုင်ပီတူတယ် လူတူတူပဲဖြစ်မှာပဲ လို့ မတွေးစေချင်ဘူးဗျို့
တခါသား မြို့ တစ်မြို့ က စာရေးသူတွေ. ကြမ်းကြရမ်းကြတော့
သဂျီး အိုင်ပီကို ဘန်းဖူးပါတယ်
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က မြို့တွေ မဆီမဆိုင် ရွာထဲ ဝင်မရ ဖြစ်သွားဖူးရဲ့
ကိုယ့်ဆြာ သိမှာပါ ရွှေပြည်ကြီးမှာ အိုင်ပီက နည်းနည်းလေး ဆိုတာ
ဆိုတော့. လူကို ban ရတာ. လွယ်ပါတယ်.
အလကားရနေသမျှသော email တွေကနေ အထပ်ထပ်အခါခါ register လုပ်ပြီးရေးချင်ရာရေးတင်နေဦးမှာဖြစ်လို့
ဒါဟာ ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်း မဟုတ်ပြန်ဘူးလေဗျာ
ဆိုတော့ ဖြေရှင်းနည်းက site admin ကို တိုင်စာပို့ပါ
အများသဘော ခံယူပါ. သူ response လုပ်တာကို
တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအကျိုးတော့ ကျုပ်တို့လည်း
အယုတ်လျော့ မခံပါဘူးဗျာ. အနှီ ပိုစ့်အတွက်
Report လုပ်ထားကြ လုပ်ပြီးကြပြီ ကြားပါတယ်
Admin ကို နည်းနည်း စောင့်ပေးကြပါ လို့ မေတ္တာရပ်ရင်း
အကိုရေ စွပ်စွဲတယ်ဆိုလဲဗျာ စာဖတ်ပြီးမှ ပြောမှပေါ့။ကျနော်ရေးတဲ့ ပို ့စ်ကို
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာတော် အရှင် “ဝီရသူ” သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်.. “ဝီရသူ” သဘောထား (၃/၇၄) by Ashin Vicittabhivamsa on Tuesday, June 5, 2012 at 5:24am · ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နှင့် တောင်ကုတ်မြို့တို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မသဟာယကျောင်း၊ နာယကဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တဝိစိတ္တာဘိဝံသ-ရှင်ဝီရသူ(မစိုးရိမ်)၏ သဘောထား အပြည့်အစုံကို အတိအလင်း ထုတ်ဖော်ကြေညာအပ်ပါသည်။ … (က) 28-5-2012- ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့ ကျောက်နီမော်ကျေးရွာမှ အသက်(၂၇)နှစ် အရွယ်ရှိ မသီတာထွေး (ရခိုင်လူမျိုး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်) မိန်းကလေးကို မူဆလင် (၃)ယောက်က အဓမ္မပြုကျင့်၍ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ (ခ) မသီတာထွေး အကျင့်ခံ အသတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တရားခံအစစ်အမှန် ဖော်ထုတ်ပေးဖို့၊ ဥပဒေ အတိုင်းတိကျစွာ အရေးယူပေးဖို့ ရဲစခန်းရှေ့တွင် ရွာသူရွာသားများက လာရောက်တောင်းဆို ဖိအားပေးခဲ့ကြောင်းနှင့် ထိုသို့ တောင်းဆိုသည့် ရွာသူရွာသူများတွင် မူဆလင်များလည်း ပါဝင်တောင်းဆိုကြကြောင်း သိရပါသည်။ (ဂ) ပြစ်မှုကျူးလွန်သော တရားခံမူဆလင်(၃)ယောက်ကို ရဲစခန်းက ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း၊ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် အပူတပြင်းစီစဉ်နေကြောင်းနှင့် တရားခံ(၃)ယောက်ကို ဖမ်းဆီးရာတွင် မူဆလင်များက ဝိုင်းကူဖမ်းပေးခဲ့ကြောင်းလည်း သိရပါသည်။ (ဃ) 2-6-2012 ရက်နေ့တွင် သံတွဲမှရန်ကုန်သို့ ထွက်ခါွလာသော ရိုးမသစ္စာ ခရီးသည်တင်ကားဖြင့် လိုက်ပါလာသော မူဆလင်(၁၀)ယောက်ကို တောင်ကုတ်ဒေသခံများက ဝိုင်းဝန်းသတ်ဖြတ်လိုက်ကြောင်းလည်း သိရပါသည်။ (င) ထိုသို့ သတ်ဖြတ်ခြင်းမှာ 28-5-2012-ရက်နေ့တွင် အဓမ္မအကျင့်ခံ၊ အသတ်ခံလိုက်ရသော ရခိုင်သမီးပျိုလေး မသီတာထွေး အမှုနှင့် စပ်ဆက်နေကြောင်းလည်း တွေ့ရပါသည်။ (စ) မသီတာထွေးအား မတရားပြုကျင့်ခဲ့သော မူဆလင်(၃)ဦးကို တရားဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူဖို့ ပြင်ဆင်နေကြောင်းနှင့် မူဆလင်(၁၀)ဦးကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခဲ့သော တောင်ကုတ်ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုးတို့ကိုလည်း တရားဥပဒေအရ အရေးယူဖို့ စီစဉ်နေကြောင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရက အတိအလင်း ကြေညာခဲ့သည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ (ဆ) ဤဖြစ်စဉ်တွင် အမှားကို အမှားနှင့် တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမှားကိုအမှားနှင့် တုံ့ပြန် ခြင်းဖြင့် အမှန်မထွက်ပါ။ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ပါလျက် လက်တုံ့ပြန်သတ်ဖြတ်ခြင်းသည် နှစ်းဦးနှစ်ဘက်များစွာ နစ်နာစေနိုင်ပါသည်။ (ဇ) မုဒိမ်းမှုနှင့် လူသတ်မုဒိမ်း၊ မုဒိမ်းလူသတ်အမှုများကို ကျူးလွန်သူများတွင် မူဆလင်များက ရာခိုင်နှုန်း ပိုများသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဤသည်မှာ ဘာသာရေးအစွန်းရောက် ဂိုဏ်းဆရာများ၏ သွေးခွဲသပ်လျှိုမှု၊ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှု၊ မြှောက်ပင့်ပေးမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ရှုမြင်ပါသည်။ စိတ်မထိမ်းနိုင်၍ဖြစ်စေ၊ အပျော်သဘောကျူးလွန်မိ၍ ဖြစ်စေ၊ လူမျိုးနှင့် ဘာသာသာသနာကို ပစ်မှတ်ထား စော်ကားခြင်းဖြစ်သည်ဟု နစ်နာသူများဘက်မှ မှတ်ယူသွားနိုင်ပါသည်။ မူဆလင်များသည် သီလရှင် ဆရာလေးများကိုပင် မတရားပြုကျင့်ဖူးသည့် ဖြစ်စဉ်များလည်း ခိုင်လုံစွာရှိနေသောကြောင့် ထိုသို့ မှတ်ယူမည်ဆိုလျှင်လည်း မှတ်ယူနိုင်ဖွယ် ဖြစ်ပါသည်။ (ဈ) ထို့ကြောင့် မူဆလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ဘာသာဝင်များက မြန်မာ ပြည်ဖွား တိုင်ရင်းသားများအပေါ် စော်ကားမော်ကား ပြုကျင့်ခြင်း၊ ရန်လိုရန်စသည့် အပြုအမူများ ပြုလုပ်ခြင်းများ မရှိရလေအောင် အလေးအနက်ထား၍ ဆုံးမပဲ့ပြင် သွန်သင်ပြသသင့်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးက ရွံရှာမုန်းတီးနေသော မူဆလင်များ၏ အစွန်းရောက် အပြုအမူများကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ကြောင်း အတိအလင်း ပြောကြားလိုပါသည်။ (ည) ရခိုင်အမျိုးသားများအနေဖြင့် တရားခံအစစ်အမှန် ပေါ်ပေါက်ဖို့နှင့်၊ ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်စေ ဖို့အတွက် ရဲစခန်းကို ဖိအားပေးခြင်း၊ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ စည်းလုံးညီညွတ်တက်ကြွစွာ ရဲရင့်ပြတ်သားစွာ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အာဏာပိုင်များက တရားဥပဒေကို မျက်ကွယ်ပြုခြင်း အဂတိလို်က်ကာ မတရားဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ လူမျိုးခြားနှင့် ပေါင်းကာ ကိုယ့်လူမျိုးကို ပြန်လည်အနိုင်ကျင့်နေခြင်းတို့ ရှိမှသာလျှင် အင်အားသုံးခြင်းကို စဉ်းစားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မူဆလင်(၃)ယောက် ကျူးလွန်သည်ကို အပြစ်မရှိသော၊ အမှုနှင့်မသက်ဆိုင်သော မူဆလင်များကို လက်တုံ့ ပြန်ခြင်းဖြင့် အစ္စရေး ပါလက်စတိုင်းလို မငြိမ်းချမ်းသော စစ်မက်ဇုံကြီးဖြစ်သွားနိုင်သည့် အရေးအရာများကိုလည်း ငြိမ်ချမ်းလို သူတိုင်းက လုံးဝမလိုလားကြပါ။ လူ(၃)ယောက် အပြစ်ရှိသည်နှင့် လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးကို ပစ်မှတ်ထားပြီး လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုမျိုးကို လုံးဝအားမပေးနိုင်ပါ။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ကြီးမှာ မတူကွဲပြားသော ဘာသာတရားပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံတို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နို်င်မှသာ ရင့်ကျက်၊ ပြည့်ဝ၊ စံမီသော ဒီမိုကရေစီရွှေနိုင်ငံကြီးသို့ အရောက်ချီတက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပျိုမျစ်နုနယ် အသိမကြွယ်သေးသော မွေးဖွားစ ဒီမိုကရေစီကလေးသူငယ်လေးကို ဝိုင်းဝန်းထိန်းကျောင်း ပြုစုစောင့်ရှောက်ကြဖို့နှင့်၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိခိုက်စေမည့် အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များကို ရှောင်ကြဉ်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံတောင်ပန်တိုက်တွန်း နိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အစဉ်အမြဲ လိုလားသူ
ဓမ္မသဟာယကျောင်း နာယက မစိုးရိမ်တိုက်သစ် မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေး။ 5.6.2012(၁၃၇၄-နယုန်လ္ဆုတ် ၁-ရက်၊ တနင်္လာနေ့) Email- wirathu2012@gmail.com
.::We are watching you::.
Myanmar Cyber Counter-DDos Team… ခင်ဗျ။
အပေါ်မှာ ရွာသားတွေရဲ့ ဆွေနွေးပြောချက်လေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ရင် သဘောပေါက်မှာပါ၊ ဒီရွာမှာက အလွှာပေါင်းစုံက အမြင်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရေးကြတာမို့ စာပေအစုံပါဝင်နေတာပါ။ ပြီးတော့ ပိုစ့်တွေကလည်း ပိုစ့်တင်တဲ့သူရဲ့ အမြင်သဘော ထားဘဲဖြစ်တာမို့ တစ်ရွာလုံးပြုတ်အောင်တော့ မလုပ်စေချင်ပါဘူး။
မောင်ရင်တို့ သဘောမတွေ့တာရှိရင် သူကြီးထံကန့်ကွက်နိုင်ပါတယ်၊ ခုလောလော ဆယ်တော့သူကြီးကခရီးသွားနေလို့ပါ။ ပြန်ရောက်ရင် အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့
မျော်လင့်ပါတယ်။ စဉ်းစဉ်းစားစားလေးလည်း လုပ်စေချင်ပါကြောင်းခင်ဗျာ။
တကယ်လို့ သူ့ကို မန်ဘာကနေ ထုတ်လိုက်ပါတယ်ထား… နောက် အကောင့်တစ်ခုနဲ့ ဝင်ရေးရင်ရော….
မန်းတလေးဂေဇက်ထဲကို ဝင်ကြည့်လို ့မရတာ ဒါကြောင့်ကိုး ၊ ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုပ် ဖြစ်တော့မည်။
hacking toolsလေးတွေနဲ ့စာအုပ်ဖတ်ကလိနေသူတွေကို
R u challenging us?
ဖြစ်နိုင်ရင်… Team ကလူတွေကို ဒီဆိုဒ်ရဲ့ သဘောထားကို သေချာပြောပြလိုက်ပေါ့။ လိုအပ်ရင် ဆိုဒ် စထောင်ကတည်းက စလေ့လာကြည့်ပါလို့။ နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက .. ကျနော်တို့ဆိုဒ်က ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပို့စ်တွေ ရံဖန်ရံခါ တက်လာပေမယ့် ဒီထက်ဆိုးတဲ့ ဘာသာရေးဆိုဒ်တွေ ရှိနေတယ်၊။ ဘယ်သူမှ လက်မခံနိုင်တဲ့ ပို့စ်တွေချည်း တင်နေကြတဲ့ဆိုဒ်တွေ။ ဒီမှာက လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေး ငြင်းခုန်နိုင်တဲ့ ဖို့ ခွင့်ပြုထားတော့ တစ်ချို့က လွတ်လပ်ခွင့်ကို အခွင့်အရေးယူကြတယ် ။အများအားဖြင့် သတင်း၊ ရသ၊ ဗဟုသုတတွေများပါတယ် ကျနော်တို့ဆိုဒ်မှာက။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေမှ တက်လာတဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပို့စ်ကို သူကြီးအရေးမယူလို့ (ခရီးသွားနေလို့ ) ဟတ်ကင်းလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီထက်ပို လုပ်သင့်တဲ့ ဆိုဒ်တွေကို ကျနော် ညွန်းပါရစေ……..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်လဲ နည်းပညာလိုင်းထဲကဆိုတော့ ဘာပညာပဲဖြစ်ဖြစ် pro တွေတိုင်းကို လေးစားပါတယ်။
မနေ့က ဝင်မရလို့ တောင်တောင် အီအီတွေ တွေးနေတာ ထင်တဲ့ အတိုင်းပါလားဗျာ ….
အင်း … မကောင်းပေဘူး ….. အထက်မှာ ဒီဆိုဒ်က သက်တမ်းရင့် မန်ဘာတွေ ပြောသွားသလိုပေါ့….
တလမှာ ပို့စ် ၅၀ဝကနေ ၇၀ဝ ကြားရှိတယ် ခင်ဗျားတို့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ စည်းကမ်းနဲ့ မကိုက်ညီတာ ဒီလမှာတော့ ၇၀ဝ အနှတ် ၁ ပေါ့ .. အဲတော့ ၆၉၉ ပုဒ် မျက်နှာကို မထောက်တဲ့ ဆြာတို့ရဲ့ မဟာသံမဏိ မူဝါဒနဲ့ စည်းကမ်းကို လွှတ်သဘောကျတယ်ဗျာ ….
အဲ ဆက်ဆွဲမယ်ဗျာ … Dashboard မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်
ဒီတော့ .. ဟိုချ—ကြီးဆိုလား ဘာဆိုလားကျတော့ ဘယ်သူမှ မဖျက်ကျပါလား .. အေးပေါ့ ဒါက အမျိုးဘာသာ သာသနာမှ မထိခိုက်တာ မြန်မာအင်းမေ့ချ်လေး နောက်မှာပါရင်တောင် အထူးတလည် တပ်ချ်လုပ်ကျသေး။
ထားပါ ဒီဆိုဒ်မှာ စာဖတ်သူ စာရေးသူ အတော်များများနဲ့ ကျုပ်တို့က အယူဝါဒမတူ အမြဲကွဲလွဲ ငြင်းခုန်နေကျဗျ …………..
ဒါပေမဲ့ ဒိထက်ပိုပီး ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး …. ကွဲလွဲတာက အယူအဆ .. အများအကျိုးတော့ ထောက်ရှုရတယ် ……………
ခပ်ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဒီဆိုဒ်ပျက်သွားရင်တောင် ကျုပ်တို့ ရေးဖို့ ကွဲလွဲဖို့ နေရာ နည်းမှာ စိုးလို့ သာတောင် ဂရုစိုက်သေး …
ကျုပ်တို့လဲ ကိုယ်ပိုင် ဆိုဒ်ရှိပါတယ် ..။ အဲတော့ဗျာ ခင်ဗျားတို့ အဖွဲ့ကြီးရဲ့ လောကီပညာရပ်တွေကို လေးစားသမှုရှိပါတယ်
ကျုပ်တို့လဲ လက်တွေ့ဝါဒီတွေပါ နည်းနည်းများ လွဲနေသလားလို့ (ခင်ဗျားတို့လုပ်ပုံ) …
ထားပါတော့ ခင်ဗျားတို့ အဖွဲ့ကြီး အစွမ်း ခုလက်တွေ့ သိသွားတော့ ကြုံတုန်း အကူအညီတောင်းပါရစေ ..
ကျုပ် ဘာသာရေးလဲလုပ်ပါတယ် (အဲ့ဒါတပိုင်း)
အခု ကျုပ်နေတဲ့ နေပြည်တော်မှာ DOTA online game ဆော့မရလို့ ခင်ဗျားတို့ ကူညီနိူင်ရင် ကူညီပေးကျပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ
တကယ် လုပ်ပေးနိူင်ရင် ကျုပ်အပါအဝင် ဆော့ချင်နေတဲ့ လူတွေ အနည်းဆုံး သောင်းဂဏန်းရှိသဗျာ…. ကူညီကျပါလို့
တဆိတ် အကြောင်းပြန်ပေးပါအုံးနော် ….
ကျွန်တော်တို ့ကလည်း ဒီ site ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းကို မလိုလားပါဘူး
ဒါကြောင့် DDos နည်းနဲ ့ပဲ အသုံးပြု တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဒီ site ကြီးတစ်ခုလုံး ကျဆုံးသွားအောင်တစ်ခြားနည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို ့မလုပ်သေးပါဘူး
ဒီလိုမျိုး အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စော်ကားတဲ့ post တွေကို admin တွေအနေနဲ့edit လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ
နေပြည်တော်မှာ DOTA online game ဆော့မရတဲ့ပြသနာကိုတော့ အဲဒီထက်အရေးပါအရာရောက်တဲ့ အလုပ်တွေရှိနေသေးတော့ နောင်များကြုံတော့မှပဲ……
ခုလို ပြန်ဖြေပေးလို့ ကျေးဇူးပါဗျို့
အကောင်းဆုံးကိုပဲ မျှော်လင့်မိပါတယ် ….
ဒါလေးတော့ ဟိုက်လိုက်ခ် ပြန်ထိုးချင်ရဲ့
အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စော်ကားတဲ့ post တွေကို
နေပြည်တော်မှာ DOTA online game ဆော့မရတဲ့ပြသနာကိုတော့
ခုလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဒစ်စကဒ်လုပ်လို့ရလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျို့ တကယ် အတည်ပြောတာ …
နည်ပညာပိုင်းနဲ ့ပါတ်သတ်လို ့ဆွေးနွေးလိုလျှင် ကျွန်တော့် FaceBook ကို လာ ခဲ့ပါ
Alpha Vanishing ရေ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နည်းပညာတစ်ခုကို ကျွမ်း၂ ကျင်၂ တတ်မြောက်သူတွေအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြု၊လေးစားပေမယ့် ရည်ရွယ်ချက် ၊ ဦးတည်ချက်၊ တွေက လူဆိုး၊ လူကောင်း ကွဲကုန်ရောဗျာ။
(((Alpha Vanishing says: ဒီလိုမျိုး အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စော်ကားတဲ့ post တွေကို admin တွေအနေနဲ့edit လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ……)))
admin မှာ တစ်ခြား သူ့ရှင်သန်ရပ်တည်မှုအတွက် အလုပ်တွေရှိပါတယ်။သူဘာကြောင့် ဒီဆိုက်ကို လုပ်နေတာလဲဆိုတာ ကျနော်တို့ မြင်မိတယ်။ အဓိက က စာပေကို ဝါသနာပါတယ်၊ ဒါအပြင် သူလဲနိုင်ငံရေးစိတ်၊ မြန်မာပြည်တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း စိတ်ရင်းရှိလို့ လုပ်နေတာပါ။ မတူူတဲ့အတွေးကတော့ အနောက်မှာနေတာများတော့ လူ့အခွင့်အရေး ..လွတ်လပ်ခွင့်ကို အလေးထားတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်နိုင်ခွင့်ရှိပေမယ် လွတ်လပ်စွာ စော်ကားပိုင်ခွင့်မရှိဘူး ပေါ့ဗျာ။ ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူတဲ့သူတွေကလဲ အများသား။ ခင်ဗျားတို့ အထင်လွဲပြီး ကိုင် ကြသလိုပေါ့ဗျာ..။ ပွန်းဆိုက်တွေလို တက်ကြွတဲ့ မော်ဒီနေတာတွေ မပေါတော့ ပို့စ်မှန်သမျှကိ ထိန်းဖို့ ခတ်တယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ် ………….ဒါကြောင့် ဒီဆိုက်ကို ဒီလို ဟတ်တာထက် ပိုပြီး လုပ်သင့်တဲ့ဆိုဒ်တွေကို …… လိုအပ်ရင် ကျနော် လင့်တွေပေးပါမယ်..။ ဒီဆိုဒ်ကို ဘာသာရေးပို့စ်တစ်ခုကြောင့် ဟတ်လို့ အောင်မြင်တဲ့ ပီတိထက် တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ ဆို်ဒ်တစ်ခုလုံး ဘယ်သူမှ လက်မခံနိုင်တဲ့၊ ဘာသာကို စော်ကားတဲ့ ဆိုဒ်တွေကို အောင်မြင်မှသာလျှင်……. ကျနော်တို့ နည်းပညာသမားတွေမှာ ပိုက်ဆံမရရင်တောင် ..ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်အောင်မြင်ရင် ငွေနဲ့မလဲနိုင်တဲ့ ပီတိ ကို …… ခံစားရင်း……………………..
အေးဗျာ ဒီလိုပိုဒ်ရေးတော့ ကျွန်တော်ကို ဆရာလိုလို သဘာလိုလို ဂဇက်စောင့်တဲ့ဘီလူးတွေ အစွယ်နဲ့ဝိုင်းထိုးကြတယ်ဗျ မောင်ခိုင်ဆိုတဲ့ လူက ဘာသာ မဲ့လိုသူကိုသူ ယူဆထားပုံရတယ် သူသိသူတတတ်ဘဲ လူတွေကို မလေးမစားနဲ့ သူကို ဖါးတဲ့လူတွေဘဲ သူကကြိုက်တာ ဘာထူးလဲ အာဏာရှင်နဲ့ ….
အေးဗျာ ဒီလိုပိုဒ်ရေးတော့ ကျွန်တော်ကို ဆရာလိုလို သဘာလိုလို ဂဇက်စောင့်တဲ့ဘီလူးတွေ အစွယ်နဲ့ဝိုင်းထိုးကြတယ်ဗျ မောင်ခိုင်ဆိုတဲ့ လူက ဘာသာ မဲ့လိုသူကိုသူ ယူဆထားပုံရတယ် သူသိသူတတတ်ဘဲ လူတွေကို မလေးမစားနဲ့ သူကို ဖါးတဲ့လူတွေဘဲ သူကကြိုက်တာ ဘာထူးလဲ အာဏာရှင်နဲ့
အော် ကြေကွဲစရာ ……
အင်းး…ကျနော်က အိုင်တီနဲ့ပတ်သက်ရင် ဝလုံးတန်းမို့ Cyberwarfare တွေDDos တိုက်ခိုက်တာတွေ နားမလည်ပါဘူး..
ကျနော်ရွာထဲဝင်မဖတ်တာလဲကြာပါပြီ…ကျနော့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း အားမနာတမ်းပြောရရင် ရွာထဲမှာ ဗုဒ္စဘာသာကို
ဆော်ကားလိုသူတွေ သာသနာဖျက်လိုသူတွေ လည်းရှိနေသလို ..တိုင်းရင်းသားချင်းရန်တိုက်ပေးပြီး ဒီမိုကရေစီနဲ့
လူ့အခွင့်အရေးကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတဲ့ ဘင်ဂါလီလိုလားသူများလည်းရှိနေပါတယ်..အဲ့ဒီလို ဘာသာခြား
လူမျိုးခြားတွေဘက်ကနေ တိုက်ခိုက်ပြီး တင်လာတဲ့ပိုစ်တွေကိုလည်း သူကြီး က ဒီမိုကရေစီကိုအကြောင်းပြပြီး
အကောင့်အသစ်တွေဖွင့်ပြီး ပို့စ်တွေတင်နေတာ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဘယ်ကနေတင်နေတယ်ဆိုတာကို သူကြီးအနေနဲ့
အိုင်ပီ တွေကိုစစ်ကြည့်လိုက်ရင် သိမှာပါ..ဒီကိစ္စတွေမှာ ဘေးကစာဖတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျနော်သတိပြုမိသလောက်
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေဖန်တာပါ..ကျနော်ကတော့ သူတပါးရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကို မတိုက်ခိုက်တတ်ပေမယ့် ကိုယ်ယုံကြည်ရာ
ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့အကျိုးစီးပွါး ကို ဦးစားပေးကာကွယ်သင့်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒေသခံအများစုကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ ဗုဒ္စဘာသာကိုတနည်းနည်းနဲ့ ဆော်ကားတိုက်ခိုက်လာရင် မြန်မာတမျိုူးသားလုံး
အခု Myanmar Cyber Counter-DDos Team ရဲ့တိုက်ခိုက်မှု မှာကျနော်မပါဝင်ပေမယ့်..မကန့်ကွက်ပါဘူး
အခုကျနော်ရေးတဲ့ကွန်မန့် ကြောင့် သူကြီးအနေနဲ့ ကျနော့အိုင်ပီနဲ့နစ်ကို ဘမ်းလိုက ဘမ်းနိုင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတယောက်အနေနဲ့ စိတ်ထဲခံစားမိတာချရေးလိုက်ရလို့ ကျေနပ်ပါတယ်..